Pro वातावरण (Mesterolone) पाउडर किन्नुहोस् (1424-00-6) hplc ≥98% | AASraw
/ उत्पादन / एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स / टेस्टोस्टेरोन पाउडर सीरीज / Proviron (Mesterolone) पाउडर
SKU: 1424-00-6. विभाग: टेस्टोस्टेरोन पाउडर सीरीज, एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स
AASraw ग्रैण्ड बाट प्रोरेयरोन (माइस्ट्रोन) पाउडर (1424-00-6) को सीजीएमपी विनियमन र ट्र्याबल योग्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत संश्लेषण र उत्पादन क्षमताको साथ हो।
Mesterolone पाउडर (Proviron पाउडर) भिडियो
कच्चा मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयरोन पाउडर) आधारभूत वर्ण
नाम: Proviron (Mesterolone) पाउडर
आणविक वजन: 304.47
पिघल प्वाइन्ट: 208 ° C
स्टेरियोड्स चक्रमा कच्चा मेस्ट्रलोन पाउडर (प्रोयरोन पाउडर) प्रयोग
कच्चे मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयरोन पाउडर) नामहरू
Mesterolone लाई पनि Proviron को रूपमा भनिन्छ।
कच्चा मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयरोन पाउडर) प्रयोग
Proviron खुल्ला सामान्यतया प्रति दिन 50-150mg बाट दायरा। तथापि, 100mg प्रति दिन भेट्टाउँदा 100mg र 150mg सँग उच्च प्रभावकारी रूपमा न्यूनतम लाभकारी खुट्टा हुन। सामान्य प्रयोग सामान्यतया 8-12 हप्ताको बीचमा हुनेछ। तथापि, एक चक्रमा एक स्टिकिङ बिन्दु सफलतापूर्वक प्रयासमा, एक चक्रको अन्तमा भन्नुहोस् एक Provincon को6हप्ताको कोर्सले चाल गर्न सक्छ।
कच्चा मेस्टरोलोन पाउडरमा चेतावनी (प्रोयरोन पाउडर)
Proviron प्रयोगको सम्भावित साइड इफेक्टहरू छन्; तथापि, यस स्टेरॉयडले सबै एनाबोलिक स्टेरियोड्सहरूमध्ये उच्चतम सुरक्षा मूल्याङ्कनहरू राख्दछ। अधिकांश पुरुषहरूले कुनै पनि नकारात्मक मुद्दा बिना यो स्टेरॉइड प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन्, तर कम सम्भाव्यताको बावजूद सम्भावित साइड इफेक्टहरू अवस्थित छन्। जब यो महिला प्रयोगको लागी, चिकित्सकीय वा प्रदर्शन क्षमतामा यो स्टेरॉयड सिफारिस गर्न सकिँदैन। कुपोषणको दर धेरै उच्च छ र महिलाहरु जसले आफ्नो स्त्रीत्वको रक्षा गर्न चाहानुपर्छदेखि टाढा बस्नुपर्छ।
कच्चा मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयेरोन पाउडर) थप निर्देशनहरू
एक चिकित्सीय एजेन्टको रूपमा, प्रोयरिरोन आधुनिक चिकित्सामा सबैभन्दा सामान्य प्रयोग गरिएको एनाबिक स्टेरियोडहरू मध्ये एक हो। यद्यपि, अमेरिका एफडीए द्वारा मेसेडोलोन हार्मोन कहिल्यै अनुमोदित भएको छैन। यो मुख्यतया यूरोपियन दबाइहरु मा विशेष गरी पश्चिमी युरोप मा भेटिन्छ। प्रयोगको प्राथमिक उद्देश्य एस्ट्रोजन कमजोरीहरूको उपचार गर्दै उमेर उमेरको सबैभन्दा सामान्य अपराधी हो। तथापि, यो पनि pre-pubescent पुरुषहरु मा पनि प्रयोग गरिन्छ। हार्मोन पनि पुरुषहरु मा प्रजनन सहायता को रूप मा पनि प्रयोग गरिन्छ र यो एक्लै यो एक धेरै अनोखी एनाबोलिक स्टेरॉइड बनािन्छ किनकी सबै भन्दा अधिक एनाबिक स्टेरियोड्स विपरीत प्रभाव हुन्छन्।
प्रश्न बिना प्रायरोन प्रयोग गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय काटने चरणको समयमा हुनेछ। यो स्टेरॉयडसँग Masteron लाई एक सशक्त प्रभाव को थोडा प्रदान गर्न को क्षमता छ, तर अधिक महत्वपूर्ण कुरा अन्य स्टेरियोड्स को कडा प्रभावहरु लाई बढाया जाएगा। त्यसोभए हामी यसको बलियो बाध्यतालाई औँरोजन रिसेप्टरमा विचार गर्दछौं, जसले वास्तवमा व्यक्तिलाई शरीरको वोसोलाई अझ टाढाको दरमा जलाउन सक्षम पार्दछ। यहाँबाट हामी प्रोरेनोनको एस्ट्रोजनन प्रभावलाई विचार गर्नुपर्दछ। यो सुनिश्चित हुनेछ कि व्यक्ति पानी को प्रतिधारण को कम जोखिम को रूप मा र चर्चा को रूप मा, कुल चक्र को आधार मा, यो एक पारंपरिक विरोधी एस्ट्रोजन को आवश्यकता को नकार सक्छ। त्यसपछि हामी फेरि एकपटक फेरि नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोन घुमाउन बढि बाँचिरहेका छौं। यो anabolic स्टेरॉयड प्रयोग को यस चरण को समयमा अक्सर कम हो जब यो एकदम फायदा हुन सक्छ। वास्तवमा, कम डाइस्ड टेस्टोस्टेरोन चक्रको साथमा अन्य एनाबिक स्टेरियोड्सहरू समावेश छन्, हामी विश्वासपूर्वक भन्न सक्छौं कि कुल परिणाम व्यक्तिको लागि अधिक हुनेछ जो प्रोभेरोन समावेश गर्दछ जसले तुलना गर्दैन। अन्त मा, प्राथमिक आधार लाभ अधिक कठिन र अधिक परिभाषित शरीर को बढावा दिन को लागि उपयोग को लागि अन्य स्टेरॉयड को androgenicity बढयो। यो ध्यान दिनुपर्दछ जब प्रोरेनले यी विशेषताहरूलाई निश्चित रूपमा निश्चित गर्न सक्दछ जुन तपाईं दुबारा नहुँदा सम्म यो ध्यान दिइने छैन।
कच्चा मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयरोन पाउडर)
कच्चे मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयेरोन पाउडर) मार्केटिंग
AASRAW बाट माइस्ट्रोन पाउडर (प्रोवेरोन पाउडर किन्नुहोस्) कसरी खरीद गर्ने?
कच्चा मेस्टरोलोन पाउडर (प्रोयेरोन पाउडर) व्यञ्जनहरु: